रौतहटमा गोली चल्यो, सशस्त्र प्रहरी परिचालन
scheduleशनिवार माघ ४ गते, २०७६
रौतहट, २६ भदौ । दुई धर्म सम्प्रदायका युवाहरुबीच असमझदारी बढेपछि बढेको दंगा नियन्त्रण गर्न रौतहटमा प्रहरीले ५८ राउण्ड गोली चलाएकोछ । जिल्लाको राजपुर नगरपालिका-८ कुडिया बजारमा प्रहरीले २९ राउण्ड हावाइ फायर र ३० राउण्ड टियर ग्याससहित ५८ राउण्ड गोली चलाएको हो ।
बुधबार मुस्लिम समुदायको मुहरर्म पर्व मनाउन गएका युवाले हिन्दूहरूले मनाउने पर्व छठको स्थानमा क्षति पुर्‍याए स्थानीयहरुबीच तनाव बढेको थियो । उक्त विवाद बढ्दै जाँदा विहीबार पनि उक्त क्षेत्रमा झडप सुरु भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो । उक्त क्षेत्र अहिले पनि तनाब ग्रस्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक नबिन कार्कीले जानकारी दिए ।
बुधबार साझ पनि झडपलाई नियन्त्रणा लिन प्रहरीले ८ सेल अश्रु ग्याससहित २९ राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो । झडपको क्रममा करिब १ दर्जन प्रहरीसहित केही प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन् ।
प्रहरीले विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले छठ घाटमा मुस्लिम समुदायले लगाएको झण्डा आफैले हटाएको छ । राजपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सकिल अख्तरले घटनामा राजनीतिकारण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । आपसी सदभाव कायम गर्न बुधबार साँझ सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो ।
अहिले उक्त तनावग्रस्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल पनि परिचालित भएको छ । तनावग्रस्त क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएकोले पनि तनावले उग्ररुप लिने गरेको छ । उक्त स्थानमा प्रत्येक वर्ष मुस्लिमको पर्व मुहरर्म र हिन्दूहरूको पर्व झण्डी मनाउने क्रममा झडप हुँदै आएको छ ।
अब प्रदेश एकमा सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा छ जना बेपत्ता, छ को जीवितै उद्धार
सुदूरपश्चिममा चौथो पटक हिमपात
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो खस्यो
समाजवादी सरकारको निर्णय- सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता
मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा दुःख व्यक्त
ट्याङ्करको ठक्करबाट मृत्यु, मृतकको नाम बतन खुलेन
जुम्लामा फेरि हिमपात, हिउँले जनजीवन प्रभावित
सुनिताले जन्माइन् चम्ल्याहा शिशु
प्रदेश २ मा सुरु भयो छोरी बीमा सप्ताह, इन्टरनेट निशुल्क
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्यो
होटेलमा मृत फेला परे वडाध्यक्ष
हत्या गरेको आशंकामा २ जना पक्राउ
सुरु भयो १५ दिने त्रिवेणी मेला, यस्तो छ प्रचलन
६१ बोरा कपडासहित पक्राउ परे लामा
डोटी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइने : मुख्यमन्त्री भट्ट
बहुविवाह गर्ने जोडी प्रहरी खोरमा
ज्यान र हतियार खरखजाना मुद्दामा ३ जना पक्राउ
रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगलाई कर छुट
‘हेलिप्याड’ सबै स्थानीय तहमा बन्दै
पासवर्ड या प्याटर्न भुलेर मोबाइल लक भयो ? यसो गर्नुहोस्
हामीले कहिलेकाहीँ एन्ड्रोइड डिभाइसको पिन, पासवर्ड या प्याटर्न लक भुल्न सक्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीलाई निकै अप्ठेरो महसुस हुनसक्छ...
सफलताका सुत्र हुन् महान वैज्ञानिक आइनस्टाइनका यी १० मन्त्र !
एजेन्सी । संसारका महान वैज्ञानिकहरुमध्ये एक अल्बर्ट आइनस्टाइन, जसले सापेक्षताको सिद्धान्त (Theory of Relativity) बाट ब्रह्माण्डको निमबारे...
२० करोड वर्ष पुरानो २०० रुखहरू जसलाई विनाशकारी डडेलोबाट पनि बचाइयो
सिडनी, ३ माघ । अष्ट्रेलियामा लागेको डडेलोले पर्यावरण र जैविक विविधतामा अत्यधिक नोक्सानी पुर्‍याएका छ । यही दुःखद खबरको...
मिटरब्याजको तनावले आत्महत्या, दुई नाबालकसहित जमुनाको मृत्यू
धादिङ, ३ माघ । मिटरब्याजका कारण एक युवतीसहित दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । बिहीबार धादिङको बेनिघाटमा त्रिशूली नदीमा दम्पती...
राष्ट्रपतिसँग जापानी उपमन्त्रीको भेट
काठमाडाैं, ३ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्र राष्ट्र जापानका ‘पार्लियामेन्ट्री भाइस...
पश्चिमी वायुले वर्षा, कहिलेदेखि हुन्छ माैसममा सुधार ?
काठमाडाैं, ३ माघ । नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशैभर बदलीसँगै वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा...
मोबाइलको ब्याट्रीबारे ७ महत्वपूर्ण तथ्य, जुन हरेक प्रयोगकर्ताले जान्नैपर्छ !
एजेन्सी । अहिलेको प्रविधिको युगमा मोबाइलको प्रयोग नगर्ने सायदै होलान् । हरेक मानिसको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । मोबाइल बोक्नेहरुले...
मोबाइल फोन ह्याङ भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ५ तरिका अपनाउनुहोस्
तपाईं आफ्नो मोबाइल फोन पटक–पटक ह्यङ्ग हुने समस्याले तनावमा हुनुहुन्छ ? धन्दा नमान्नुहोस् यी ५ तरिका अपनाउनुहोस् जसले तपाईंको...